‘पेश्की माग्दा शरीर मागे, धम्क्याउँदै यौन शोषण गरे !’ घटना बाहिरिएपछि अरु पनि निस्किए शोषित – Chautari Online
‘पेश्की माग्दा शरीर मागे, धम्क्याउँदै यौन शोषण गरे !’ घटना बाहिरिएपछि अरु पनि निस्किए शोषित
September 10, 2020 739
२५ भदौ, पोखरा । श्रीमानको दुर्घटनामा ज्यान गएपछि श्रीमतीले पोखराको हिमालयन आँखा अस्पतालमा जागिर पाइन् ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएकी ती महिलामाथि सोही अस्पतालका लेखा प्रमुखको आँखा लाग्यो । आर्थिक अभाव हुँदा अस्पतालको लेखा शाखामा ती महिलाले पेश्की माग्थिन् तर प्रमुखले अनेक सर्त राख्न थाले ।
यौन इच्छा पूरा गर्न दिए अस्पतालबाट पेश्की मिलाइदिने भन्दै डर धम्कीमात्रै देखाएनन्, कोठामै पुगेर अभद्र व्यवहार गर्न लागेको ती महिलाको आरोप छ । आर्थिक हिसाबले कमजोर ती महिलाको लेखा प्रमुखका अघि केही जोर चलेन । यस्तै घटना ४/५ वर्ष चलिरहेको ती महिलाको आरोप छ ।
अति भएपछि गत शुक्रबार ती महिलाले अस्पताल प्रशासनमा उजुरी दिइन् । अस्पतालका लेखा प्रमुखले डर, धम्की, प्रलोभन देखाएर यौन शोषण गरेको र घटना बाहिर ल्याए जागिर नै खाइदिने बताएको महिलाको आरोप थियो ।
अस्पताल प्रशासनले लेखा प्रमुखलाई तत्काल निलम्वन गर्यो र अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढायो । अस्पतालले मेडिकल डाइरेक्टर डा. इन्द्रमान महर्जनको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समितिसमेत गठन गरेको थियो । समितिले छानबिन गरी दोषी उपर कारबाही गर्ने र सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने अस्पतालले बताएको थियो ।
यसैबीच प्रहरीमा जाहेरी नदिन दबाब दिइएको र भित्रभित्रै मिलापत्र गराउन खोजिएको घटना सार्वजनिक भयो ।
जब यो घटना बाहिर आयो, लेखा प्रमुखबाट यस्तै शोषणमा परेको भन्ने अरु महिला पनि थपिए । ३१ र ३७ वर्षीया महिलालाई बलात्कार आरोपमा प्रहरीमा जाहेरी नै पर्यो । अस्पतालबाट पेश्की माग्दा लेखा प्रमुखले अनेक बहाना बनाएर यौन शोषण गरेको महिलाहरुको आरोप छ ।
‘पेश्की माग्न जाँदा शरिर माग्थे, घरमै आएर मनपरी गरे । घटना बाहिर ल्याए जागिरै खाने धम्की दिन थाले,’ पीडित महिलाले भनिन्, ‘यसरी ४/५ वर्षसम्म शोषण गरिरहे । अति भएपछि उजुरी गरेकी हुँ । अझै पनि केही हुने हो कि मनमा डर छ ।’
दुई महिलाले दिएको जाहेरीका आधारमा कास्की प्रहरीले आरोपी लेखा प्रमुखलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । ‘पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएका छौं,’ कास्की प्रहरी प्रवक्ता सुवास हमालले भने, ‘महिलाको मेडिकल रिपोर्ट आएपछि थप अनुसन्धान अगाडि बढ्छ ।’
Prevकाठमाडौँ उपत्यकामा कुन बार कुन पसल खोल्न पाइने ?
Nextअर्को जिल्लामा जाँदा आफ्नै खर्चमा १४ दिन क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्ने